30 Cowboy Bebop Makotesheni Ekukudzosera Iwe Kudzana Iko 90's - Zvimwe
Makumi matatu Eakanaka Zvikuru Kubva kuCowboy Bebop Iyo Inokudzosera Kuma 90's
Yakaratidzwa mufananidzo sosi: Wallpaper UP
Cowboy Bebop ndeye anime yakamisikidzwa mugore ra2071, zvinova zvinosetsa nekuti ichi chikoro chekare chaive pamberi penguva yayo.
Iyo yakasarudzika nzvimbo adventures uye yakasarudzika madingindira ichaita kuti iwe ufunge pane yakadzika nhanho, uye yakavhurika kune ako pfungwa kune matsva maonero senge hapana imwe anime yenguva yayo.
Heano mamwe emashoko BEST Cowboy Bebop inofanira kupa.
Cowboy Bebop Anonyanya Kukanganwa Zvinyorwa:
'Iwe wakandiudza kamwechete kuti ndikanganwe zvakapfuura, nekuti hazvina basa, asi ndiwe uchiri wakasungwa kune zvakapfuura, Spike.' - Faye Valentine
'Ini handikwanise kunamira munzvimbo imwechete kwenguva yakareba - zvinondiuraya. Mhuri yangu yese yakadaro. ' - Faye Valentine
“Unoziva mutemo wekutanga muhondo? vapfure ivo vasati vapfura iwe. ” - Faye Valentine
“Zvekare ndezvekare uye ramangwana nderemberi. Murume murume uye mukadzi mukadzi. Ikozvino ndiyo iripo. Ndiri zvandiri uye iwe ndiwe zvauri. Ndizvo chete zviripo. Zvine basa here? Kana kuti tinongofunga kuti zvinoita here? ” - Faye Valentine
“Kupona kwezvakanaka ndiwo mutemo wezvakasikwa. Tinonyengera kana isu tinonyengerwa. Ngekudaro, tinobudirira kana kuparara. Hapana chakanaka chakamboitika kwandiri pandakavimba nevamwe. Ndicho chidzidzo. ” - Faye Valentine
“Vanowanzo taura kuti vanhu havagone kugara vega. Asi iwe unogona kurarama kwenguva yakareba wega. Panzvimbo pokunzwa uri woga muboka, zviri nani kuva wega uri wega. ” - Faye Valentine
# 2 - Zvinyorwa zveLondon
“Mweya yatakapihwa naMwari, mweya yedu. Midzimu yedu, iyo yakawana nzira yekushambira kuburikidza nehukuru hwetiweki uye tinogara mukusingaperi kwenzvimbo. Ko muviri wemunhu hausi gokowo zvaro here? Chimiro chehupenyu chidiki uye chisina kusimba kwekuziva nekusvika kwakakura uye kugona. ' - Londes
“Handitye kufa. Zvinongoreva kurota wakanyarara. Kurota kunogara nekusingaperi. ” - Vincent Volaju
'Pamazuva andararama, aya chete andakagara nemi aitaridzika kunge echokwadi.' - Vincent Volaju
“Hapana anokwanisa kutora mutsetse wakajeka pakati penzwisiso neapenga. Iwe unofambisa iyo tambo sezvaunoona zvakakodzera iwe pachako. Hapana mumwe munhu anogona. Uchanzwisisa nekukurumidza ... kuti rakapusa inyika ino. ' - Vincent Volaju
“Unoziva zvakawanda nezve purigatori? Ndiyo nzvimbo iri pakati pedenga negehena, uko avo vakasara kumashure, vasingakwanise kupinda kudenga vachiramba vachitambura, nzvimbo yekurwira uye yekurwadziwa. 'Mune mamwe mazwi, nyika yatiri izvozvi.' - Vincent Volaju
# 4 - Jet Nhema Makotesheni
“Zvakangofanana nezvakataurwa naCharlie kuhope dzangu. Kana iwe uchida kugamuchira iwe unofanirwa kupa. See Spike, you have to listen to your dreams, ndiko kwaunowana musikana wako wekurota. ' - Jet Nhema
“Vanhu vaiitirwa kuti vashande uye vadikitira nemari yavo mushure mezvose. Avo vanoedza kupfuma nekukurumidza kana kurarama vachiripira vamwe - vese vanowana kutsiva kwaMwari munzira. Ndicho chidzidzo. Asi, chinhu chimwe pamusoro pevanhu ndechekuti vanokurumidza kukanganwa chidzidzo chavakadzidza. ” - Jet Nhema
'Varume vanogara vachiita sevanofunga nezvevavo vekare vasati vafa, sekunge kuti vaitsvaga vachitsvaga humbowo hwekuti vakararama zvechokwadi.' - Jet Nhema
'Iwe waigara uripo nekuda kwangu, uye ndizvo chete zvandaida. Iwe chete. Nechimwe chikonzero, ini handina kunzwa kusuruvara kana kuputswa, zvaisangoita kunge zvechokwadi. Asi zvishoma nezvishoma ndakaona kuti chaive chaicho - kuti iwe wanga waenda. Zvishoma nezvishoma, ndakanzwa chimwe chinhu mukati mangu chichiita chiveve. ” - Jet Nhema
“Zvese zvine mavambo nemagumo. Hupenyu ingori kutenderera kwekutanga uye kumira. Pane magumo atisingade, asi hazvidzivirike. Tinofanira kutarisana navo. 'Izvi zvinoreva kuva munhu.' - Jet Nhema
“Ini newe patakatanga kusangana, wakandiudza chimwe chinhu. Iwe wakati iwe wakafa kamwe chete, uye kuti iwe wakaona kufa. Sei usingagoni kungoirega ichienda? Kanganwa zvakapfuura. ” - Jet Nhema
“Tarisa maziso angu, Faye. Imwe yacho ndeyekunyepera nekuti ndakarasa mutsaona. Kubva ipapo, ndanga ndichiona zvakapfuura mune rimwe ziso uye zviripo mune rimwe. Nekudaro, ini ndaifunga kuti ndinogona kungoona zvigamba zvechokwadi, kwete iyo yose mufananidzo. Ndainzwa kunge ndaive ndichiona hope dzandisingatombomuke kubva kwadzo. Ndisati ndazviziva, kurota kwacho kwakange kwapera. ” - Spike Spiegel
“Ini ndaive mudiki ipapo, hapana chandaitya, handina kufunga zvekufira sekondi. Ndaifunga kuti ndakanga ndisingakundiki. Ipapo ndakasangana nemumwe musikana. Ini ndaida kurarama, ndakatanga kufunga saizvozvo; kekutanga kekuti ndaitya kufa. Ndakanga ndisati ndambonzwa saizvozvo. ” - Spike Spiegel
'Ngirozi yakadonha yakadzingwa kudenga, inomuka muchiedza kuti igashire nerunako rwaMwari.' - Cowboy Bebop
'Ndinoda mhando yemukadzi anokwanisa kukava dhongi rangu.' - Spike Spiegel
“Pane imwe nguva, paiva nekatsi ine mitsetse yengwe. Iyi katsi, yakafa kufa kwemiriyoni, yakamutsazve uye yakararama hupenyu hwemiriyoni. Uye aive nevaridzi vakasiyana siyana vaisatomboita hanya nazvo, katsi yaisatya kufa. Zvino Rimwe zuva, akasangana nekitsi chena yechikadzi, vaviri vacho vakawira murudo vakagara pamwe chete vachifara. Zvakanaka, makore akafamba uye katsi yechikadzi chena yakakwegura ikapfuura. Iyo Tiger Yakabvarurwa katsi yakachema kane miriyoni, ipapo iye akafawo. But this time… ..haana kudzoka. ' - Spike Spiegel
yakanaka anime yekutarisa muchirungu
“Pane zvinhu zvitatu zvandinovenga zvakanyanya: Vana, zvipfuyo, uye vakadzi vane hunhu. Saka ndiudze, sei tichiita kuti dzese dzirongedze mungarava yedu? ” - Spike Spiegel
'Haudi kutandara nekutambisa hupenyu hwako nesu?' - Spike Spiegel
“Ini handiendi kunofa. Ndiri kuenda ikoko kuti ndizive kana ndiri mupenyu zvechokwadi. ' - Spike Spiegel
# 6 - Kuseka Bull Quotes
“Usatya Rufu. Rufu runogara ruri padivi pedu. Kana isu tichiratidza kutya, inosvetukira kwatiri nekukurumidza kupfuura mwenje. Asi, kana tikasaratidza kutya, inotitarisa zvinyoro nyoro yozotitungamira mukusakwana. ” - Kuseka Bhuru
# 7 - Anotyisa Makotesheni
'Ngirozi dzakadzingwa kudenga hadzina imwe sarudzo kunze kwekuva madhimoni.' - Zvinotyisa
'Hapana chakasara kutenda mazviri.' - Zvinotyisa
# 8 - Andy kubva kuDe Oniyate Quotes
'Sei tisinganwe kwandiri uye kuratidza kwangu mumaziso ako akanaka?' - Andy Von De Oniyate
# 9 - Gren makotesheni
'Wati iwe haudi macomrades, asi ini ndakanamatira kune iro izwi ... kusvika pakuchema.' - Gren
Une chero mazano eanouya quote-post? Goverana icho mune zvakataurwa.
25 Emotional Anime Quotes NezveRudo Uye Ukama
chii chakanakisa anime